Zvakaoma Here Kuita Mari Nehukama Kushambadzira? - Dzidza Nyanzvi Kubloga
Zvakaoma Here Kuita Mari Nehukama Kushambadzira?
Chikamu chePost:Kubatana Kushambadzira / Tora Mari Pamhepo
Nguva yekuverenga:5 mins verenga
Sangano rekushambadzira ndere zvekushambadzira chigadzirwa. Iwe unotora chigadzirwa pamberi pevateereri, tsanangura maficha- zvinobatsira sei chigadzirwa icho kwavari? kana vachizvifarira, ivo vanotenga uye vachidzosera kutengesa, unowana komisheni. Iyi ipfungwa yakapusa yekubatana kwekushambadzira.
Hazvina kuoma asi nzira iri nyore yekuita mari neakabatana kushambadzira uchienzanisa dzimwe nzira dzekugadzira mari. Iwe unogona kuwana muhombe nekuedza kushoma. Saizvozvo, unofanirwa kunanga vateereri chaivo, vanhu vari kunyanya kutsvaga chigadzirwa vanofanirwa kunge vachida.
Vateereri chaivo vane basa zvakanyanya. Vamwe vanhu vanotopepeta vateereri uye vanovavarira gare gare kuti vawedzere mwero wekushandura. Kufirita kunze kwevanhu ipfungwa yakagadzirwa seye fanera.
Zvimwe zvinhu, iwe unofanirwa kuve nehanya nekuita nyore kubva zvakaoma kuti uwane mari. ngatikurukurei nezvazvo.
Affiliate Commission inopa makambani
Targeting yakakodzera Vanotenga
Ita Mari kubva Kubatana Kushambadzira Nyore uye Kubudirira
Pamwe nevateereri chaivo, haugone kuramba kukosha kwekomisheni muzana. Hapana fungidziro, Ndakaona mazana emazana evanhu mienzaniso vari kugadzira zvinopfuura $2000 pamwedzi nyore nemaAmazon vanobatana.
Zvisinei, mamwe makomisheni anopa makambani haasi anopfuura shamwari dzeAmazon. Amazon inopa chete 8 ku 10% maximum Commission nepo, makambani senge Clickbank akagadzirira kubhadhara 60% yekomisheni yechigadzirwa. Saka, Iwe unofanirwa kuve nehungwaru uchisimudza iyo chaiyo mhando yechigadzirwa uye komisheni rate.
Zvinoitwa nevazhinji vatsva- ingo gadzira yakabatana webhusaiti gadzira zvisinga gutsikane zvemukati, pawebhusaiti yavo uye tangotanga kusimudzira. Ivo havanzwisise kukosha kwevatengi chaivo. Izvi zvechokwadi zvinoita kuti vaome kuita mari online.
Kunongedzera chaiko ndiko kwakanyanya kukosha kwekubudirira kwekushambadzira kwakabatana. Ndakaona zviitiko zvinoverengeka apo vanhu vanopa chigadzirwa chavo kune avo vanhu vasingafarire.
Semuenzaniso -Kana mumwe munhu achitsvaga chigaro uye iwe uri kusimudzira nharembozha maficha, uku zvachose kutambisa nguva, simba, kushanda nesimba uye zvirokwazvo zvinokuodza moyo uye zvinoita zvakaoma kuwana mari kubva kune vanobatana kushambadzira.
Ndinorangarira, pandakatanga kushamwaridzana kushambadzira ndakaita blog yakanaka kwazvo. Isu timu pamwe chete takashanda mukugadzira mhando uye zvinogutsa zvemukati. Isu takaenda kunotsvaga kwakadzama kwemakwikwi epasi akakosha mazwi kubva kuSemrush, uye kubva kuGoogle kuzadzisa. Isu tava pedyo 40 + zvinyorwa zvekuenderera 2 mwedzi.
Isu tanga takanyatso tarisa pane izvo zvehupenyu zvinangwa. Zvinoreva kana mumwe munhu achitaipa “Laptop yakanaka pasi 1000 dhora”. Ivo vanofanirwa kushanyira yedu blog chinyorwa chinonzi sa “Laptop yakanaka pasi 1000 dhora”.
Zvatiri chaizvo kuita- tiri kunanga vateereri chaivo. Zvinoreva kuti mumwe munhu arikutsvaga “Laptop yakanaka pasi 1000 madhora”, uye tiri kuvashumira zvakafanana. Pano, apa, mwero wekushandurwa uchiri wakakwira mazuva ano.
kana mumwe munhu akabvunza iyo laptop ine chekuita neruzivo. Hatisi kutengesa kana kuratidzira chimwe chinhu.
Vanhu vanotora rubatsiro rweFacebook, Twitter, nezvimwewo. kutyaira traffic kune yavo webhusaiti kubva kwakasiyana masosi uye vanoguma vasina kutengesa. Chikonzero ndechekuti- Iyo traffic iwe yauri kutora kubva kunzanga midhiya, uko, ndiani anoziva mumwe munhu ari kutsvaga iyo chaiyo laptop kubva mumamirioni avanhu.
Asi kana tikataura nezvekutsvaga kuburikidza neGoogle, mumwe munhu anonyora chaizvo kiyi yakakosha uye anowana mhedzisiro ine kukosha kwazvo. Saka ndosaka chiyero chekushandurwa chichigara chakakwirira kana uchinangisa kuburikidza nemajini ekutsvaga pane enhau enhau.
Zvisinei, haugone kuramba mikana miviri. Imwe ndeye kunanga vateereri chaivo pamapoka enhau enhau. Iwe une sarudzo yekubatana nemapoka akakodzera uye nekugovana yako inoenderana nenyaya pamusoro pavo.
Sarudzo yechipiri ndeyekuenda kushambadziro dzakabhadharwa. Facebook inobvumidza iwe kunongedza yakatarwa zera boka pamwe neinofarira-based vateereri. Icharatidza yako blog post kushambadzira kune avo chete vashandisi vanofarira malaptops (semuenzaniso). Asi heino muganho mumwe zvakare, hatizive nguva yekutenga yadzo. Kunyangwe ivo vatenga kana vachida kutenga kana vari kungofarira kuwana ruzivo rweazvino kumhanya tekinoroji.
Imwe nzira yekuita mari iri nyore kuburikidza nehukama kushambadzira nekugadzira tinya mafoni. Dzvanya fanera iri kunyatso kusefa kunze kwevanhu vari kutsvaga chigadzirwa.
Izvo zvavanoita ivo vanoenda kune yakabhadharwa ads kana organic organic. Kana mumwe munhu akashanyira webhusaiti yavo, ivo vanoratidzira iwo ese maficha eiyo chaiyo inosimudzira chigadzirwa uye vanokumbira iwo akakosha ruzivo usati waenderera. Panguva yekuita, vanotora email yako, wobva waenda padanho repiri uye wechitatu. Mushure mekupedza yechipiri nhanho, vakatamira kune yekupedzisira peji yekubhadhara.
Chii chiri kuitika chiri pamusoro apa, ivo vari kuronga vanhu vanofarira. Kuita kuti zvinyatsojeka, kana 100 vanhu vanoshanyira webhusaiti kungoverenga maficha echigadzirwa, kubva zana, 30 vanhu vanozadza izvo zvakakosha, pinda yavo email.
Kupererwa ne 30, chete 5 vanhu vanozoenda kune iyo yekubhadhara peji. Dzinogona kana kuti dzisingave dzekutenga pakarepo. Asi vakaratidza kufarira muridzi webhusaiti. Ivo vanofarira icho chigadzirwa asi vasina kugadzirira kubhadhara panguva iyoyo.
Zvino nguva inotevera, kusiya vanhu vese zana, vateereri vako chaivo vanhu vashanu chete. Kana iwe ukawana yakanaka komisheni kubva kune chimwe chigadzirwa. Unogona kuwedzera iro komisheni ne 5. Kana kutumwa kwako kuri kudarika $100 yemunyu, ipapo unogona kufungidzira zviri nyore zviri nyore sei kuita mari kubva kumubatanidzwa wekushambadzira.
Kubatana Kushambadzira (uye Ungatanga Sei)
Izvo Vamwe Vari Kuverenga?
Maitiro Ekuvaka iyo Webhusaiti mushure mekutenga iyo Domain Zita?
Ndinogona here kuvaka webhusaiti neWordPress pasina Domain?
Unogona Mudzidzi Kuwana Mari Pamhepo
Maitiro Ekugadzira iyo WordPress Saiti Pasina Kubata?
Blogging Professional Na 10+ Makore Ekuziva. Nzvimbo Dzangu Dzinoshanda dziri WordPress, SEO, Ita mari Blogging, Affiliate marketing. Ndinoda kunzwa mibvunzo yako. Goverana maonero ako muchikamu chemashoko.
Verenga zvimwe zvinyorwa
Previous PostMarii yaungaite iwe kubva kuWordPress Blog?
Inotevera PostMarii yaungaite neGoogle AdSense?
Is Amazon Affiliate Marketing Yakakodzera?
Chikunguru 29, 2021
Unogona Iwe kuita yakabatana kushambadzira pamwe neAdSense?
Chikunguru 13, 2021
Tenga Zvazvino Zvipo Kuburikidza Nedu
Yakanyorwa naDamanpreet Singh Neteam
Tora Mari Pamhepo
Ndatenda Nekushanya Kwako
Inovhura mubhu nyowani
Copyright 2021 - rich-media.com- Dzidza Nyanzvi Kubloga. Kuzivisa: Iyi posvo inogona kunge iine hukama hwehukama, zvinoreva kuti tinogona kugamuchira komisheni kana iwe ukabaya link uye wotenga chimwe chinhu chatakakurudzira. Verenga zvimwe nezve Affiliate kuzivisa pano.